Nhau - Musangano Wekuchengetedza Musangano
PaMarch 1, 2020 Jitai Electronics Co, Ltd yakaita musangano wekuchengetedza basa nekugadzira dept. kugadzira chirongwa chegore rino kuronga mukuchengetedza basa.
Kurongeka kwekuchengeteka kwebasa mu2020
Kubva Mar. 1, 2020 kusvika Zvita 31, 2020 pane matanho matatu:
Chekutanga danho: Kurume 1 kusvika Kurume 31, vese vashandi kubva kumadhipatimendi ese vakadzidza kufambisa "chirongwa chinoshanda chekushandurwa kwakasarudzika kwekuchengetedzwa kwebasa" zvichikurudzira nekuvandudza hana dzenjodzi dzinogona kuzadzikiswa uye kubvongodza kwakanaka atomosphere yekukosha kugadzirisa. Madhipatimendi ese akawedzera kudzikisira nekushandisa zvirimo muchirongwa chekushandurwa kwakakosha, zvakakwidziridzwa pakukwanisa kwemidziyo nenzvimbo mudhipatimendi rayo uye chinzvimbo chekushandisa ichivimbisa njodzi dzinogona kuverengerwa pasina divi revapofu, nzvimbo dzakafa uye hadzifambe nenzira.
Chikamu chechipiri: Kubvumbi 1 kusvika Gumiguru. Kubva pane zvakapfuura kuchengetedzwa kwepamberi kunoshanda madhipatimendi ese kusvika padanho rakaipisisa renhamba uye chinzvimbo chekuchengetedza mumadhipatimendi ese uye akaomesa mutoro wematanho ese uye akatora matanho akakomba ekugadzirisa zvizere uye akavimbisa njodzi dzese dzinogona kukwiridzwa uye zviyero zvakadzika uye zvakagadziriswa. kubudikidza.
Inotyisa danho: Gumiguru 1 kusvika Zvita 31, madhipatimendi ese anofanirwa kubva pamadhipatimendi ese ane chekuita pamwe nekugadziriswa kwakakosha kuti iwedzere kuvandudza nekusimbisa mhedzisiro yekugadziriswa kwakakosha.
1. Kuwedzeredza manejimendi, kujekesa mutoro, kuyera kumusoro kugadzirisa. General maneja, maneja, webasa manejimendi, mutungamiri weboka uye vese mudonzvo vanofanirwa kunyatsoteerera kurongeka uku kwenjodzi dzinogona kuverengerwa mukuchengetedza kwebasa. Tora zvakakomba zvemitoro, komputa kurongedzwa zvakanyatso uye kuunganidza vese tsvimbo kuitisa zvingangoita njodzi kudzoreredzwa uye kumhan'ara zvakawanikwa nyaya uye tsaona mumabasa ekuchengetedza nhanho nedanho uye nekukurumidza kugadzirisa uye kuita kunyoreswa nekutevera kwevamwe kuti kusagadziriswa munguva.
2. Simbisa kudzidziswa kwedzidzo uye manejimendi manejimendi. Munguva yekuzviongorora uye kururamisa njodzi dzinogona kuitika, inozadzikisa kudzidzisa kwakachengeteka kwevashandi vese uye kunyatsoita hurongwa hwekudzidzira basa risati ratanga. Inosimbisa rakakora basa rekuchengetedza nharaunda nekudzidzisa, kudzidzisa, kutungamira kwemunda uye zvichingodaro mafomu pamwe nekuchengetedza indentification masaini, chengetedzo chenjedzo mwenje, chengetedzo ruzivo ruzivo.
3. Simbisa manejimendi manejimendi, ronga kudzidzira kwechimbichimbi. Kuvandudza tsvimbo dzese mufekitori dzinobata nekukurumidzira nekuzvidzora pachavo uye nekumisidzana munzvimbo dzine njodzi mukambani nemaitiro ane ngozi kunyatso tsvagisa nekugadzirisa nekudzokorora kuronga kwakarongedzwa kwechimbichimbi amendent uye munda unobata zviyero panguva iyi kuronga kudzokorora pre-akaronga kuronga nguva dzose.
Kambani yedu inozonyanya kukoshesa "bvunzo nzira dzekupa mubayiro uye chirango mukuchengetedza basa" uye nehukama masisitimu. Ichapihwa mubairo wekuzadzisa zvibodzwa zvegore negore. Inotarisirwa zvakanyanya kana kurangwa kubazi kana vashandi vanokonzeresa tsaona iyi nekuda kwenjodzi dzinogona kuzadzikiswa kwete munguva. Icho chichava chakadzama kudzidzisa yambiro kune avo vanotyora kuraira nenguva uye icharangwa zvakaomarara kune avo vanoverengeka vanozvipira kakawanda.